EFA mba nandre firesahana ny amin’ny ampondra iray niteny ve ianao? ‘Tsia’, hoy angamba ianao. ‘Tsy afaka miteny ny biby.’ Ny Baiboly anefa dia miresaka ny amin’ny ampondra iray izay niteny. Andeha hojerentsika izay nitranga.
Hizara Hizara Niteny ny Ampondra Iray
my tant. 42